Somali / Soo-bandhig ku saabsan Caqabadaha Maaliyadeed ee Soo food-saaray Iskoolada Cherry Creek (Bu
Salaan, Anigu waxaan ahay Scott Smith, Madaxa Sarkaalka Maaliyadda iyo qorsheynta ee Iskoolada Degmada Cherry Creek. Waxaan rabaa in aan ka hadlo dhowr daqiiqo arin ku saabsan caqabadaha dhaqaale ee ina horyaal iyo sababta aan ugu baahanahay fikradaha bulshada ee ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa. caqabadaha miisaaniyada horteena.
Kahor COVID 19, inta lagu jiray sanad dugsiyeedka 2019-20, Kormeeraha guud Siegfried wuxuu isugu yeeray koox hawleed miisaaniyadeed si ay u fiiriyaan maaliyadyada Cherry Creek iyo sahminta fursadaha sida aan u dheelitiri karno miisaaniyadeena mustaqbalka. Gudiga Miisaaniyadda ee la soo abaabulay sanadka 2019 waxay bixiyeen talooyin badan oo ku saabsan sida loo nidaamin lahaa miisaaniyadeena mustaqbalka.Fikrada hal dhinac waxey ahayd in la raadiyo fursado sidii loo kordhin lahaa dakhligeenna, dhinaca kalena waxay raadinayeen sidii loo dhimi lahaa kharashka degma dugsiyeedka oo dhan si loo miisaamo maaliyada markaana loo gudbo sannadka soo socda.
Dabcan, saameyntii COVID 19, wax walbana waa isbedeleen, iyo dakhliyada gobolka Colorado, oo iskooladeena degmadu ay ku tiirsan tahay, waxaa hoos loo dhigay 25 boqolkiiba, ama $ 3.2 bilyan. Iskool ahaan, taasi waa qiyaas ahaan boqolkiiba 5.5 dhimista maaliyadeena, ama $ 25 milyan yeey hoos u dhacday intii aan ku jirnay sannad dugsiyeedka hada jira marka aan galayno sannad dugsiyeedka soo socda ee 2020-21ka.
Markaan fiirino maal-gelinteena dhowrkii sano ee la soo dhaafay, ma ahan wax qarsoon in gobolka Colorado uu dakhligii hoos uga dhimay waxbarashada K-12. Waad arki kartaa in dakhligeena la saadaaliyay in la isticmaalo sannad dugsiyeedka 2020 -21 ay dhab ahaan kayar tahay dakhligii sannad dugsiyeedkii lasoo dhaafay ee 2018-19. Tan waxay noo soo bandhigi doontaa caqabado badan oo xaga dhaqaalaha ah mustaqbalka, iyo sida Dr. Siegfried uu ugu sharaxay waraaqihiisa uu u gudbiyey shaqaalaha iyo bulshada.
Marka, sideen halkan ku soo gaarnay? Kahor COVID, waxaan qorsheyneynay qiyaas ahaan $ 12 milyan oo lagu kordhiyo miisaaniyada aan ku shaqayno. Taasi waa kordhis oo loogu talagay degmooyinka isoolkeena oo kale ku yaal Colorado. Laakiin xaqiiqdii, sidaan hada ku sheegay, waxaa nalaga goyn doonaa $ 25 milyan. Marka, tan waa $ 37 milyan oo doolar oo ka go’day maalgalinteena bilo gudahood. Intaa waxaa sii dheer, waxaa naloo sheegay in aan qorsheyno dhimis dheeraad ah sanadka soo socda taas oo u badnaan doonta in ka badan 5.5 boqolkiiba dhimista aan qaadno sanadkaan. Waqtigan, waxaan qorsheyneynaa in boqolkiiba 7 laga jaro sannadka hada lagu jiro. Tan waxay noqon doontaa dhimis kale oo ah $ 33 milyan ee loogu talagalay degmo dugsiyeedkeena. Markaa, marka la isku daro labada miisaaniyad ee la dhimay, waxa uu dakhligii miisaaniyada hoos u dhacay ugu yaraan ilaa $ 58 milyan oo dhimis ah oo ay tahay inaan si wada jir ah u xalino inta aanaan u sii gudbin sannad dugsiyeedka soo socda.
Mid ka mid ah su'aalaha inta badan aan helno waa 'maxaa ka go'ay maamulka?' Ama, 'Maxaa laga jaray xafiiska dhexe?' Waad ka arki kartaan dhinacan, waxaan markiiba ka jarnay waaxdeena dhexe boqolkiiba 15 sanadkan, angoo kayd saneyna ilaa $ 2.4 milyan. Intaa waxaa sii dheer, mid ka mid ah talooyinkii ay nasiiyeen gudiga miisaaniyada ee ku saabsan yareynta kharashkeena wuxuu ahaa in la hirgaliyo inaan la qorin shaqaale cusub xafiiska dhexe si loo keydiyo lacagta iyadoo aan la buuxin boosaska banaan. Gudiga Miisaaniyadda waxay ku taliyeen inaan keydsano ilaa $ 2.6 milyan iyadoo la adeegsanayo istiraatiijiyadan. Waan ku faraxsanahay inaan idiin sheego in ilaa hada, dugsiyada degmadeenu ay horay u keydsadeen $ 3.2 milyan iyadoo aan la buuxin boosaskii banana
Tan waxaa ku jira in laga jaro 35 boos xafiiska dhexe ee maamulka. Waxaan ka jareynay 10 maamule, ama shan boqolkiiba shaqaalaheena maamulka, inta aan la bilaabin sannad dugsiyeedka soo socda. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan tilmaamo in markaan fiiriyo maamulka, dugsiyada Cherry Creek waa kuwa ugu shaqaalahe dhimista badan xaga xafiiska maamulka sanadankan xaaladaha dhaqaalaha awgeed marka la fiiriyo dhinaca 'Front Rangeka'. Daraasad madaxbannaan oo ay sameysay waaxda Mashruuca Maaliyadda Iskoolda Colorado yaa muujisay inaan leenahay maamulayaasha ugu yar iyo shaqaalaha xafiiska dhexe ee degmooyinka aan isku da'da nahay, iyo wax ka yar 1 boqolkiiba miisaaniyadeena guud waxaa loo isticmaala maamulka guud.
Waxaan rabnaa inaan hubino in istiraatiijiyadeena maaliyadeed ay tahay istiraatiijiyad maaliyadeed oo muddo dheer ah, oo aan u dejinay sanado badan oo heer sare ah. Waana sababtaas tan aan u qaadaneyno aragtidan mudada-dheer ah: Sideen u xalineynaa dhibaatada miisaaniyadeena ee qaab dhismeedka sanadaha soo socda oo aan si wadajir ah ugla sheqayno bulshadeena? Taas waa sababta aan ugu baahan nahay fikradaada inaad sameyso sahankaan, si marka aan bilowno inaan u yareynno miisaaniyada, Aan wax uga qabano qaab caqli gal ah iyo sida ugu macquulsan ee lagu gaari karo guusha mustaqbalka fog.
Waad ku mahadsantahay waqtiga aad maanta nasiisay iyo fikradaada. waxaan sugeynaa inaan aragno natiijooyinka sahamintan inta aan ku jirno waqigan xagaaga-summerka.